» को-को बन्दैछन नेकपा समाजवादी बाट मन्त्रि ?
को-को बन्दैछन नेकपा समाजवादी बाट मन्त्रि ?
१६ भाद्र २०७८, बुधबार १६:१२
काठमाडौँ: मन्त्रिपरिषद विस्तारको अन्तिम तयारी भइरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभिन्न ६ मन्त्रालयको जिम्मा पाउने लगभग निश्चित भएको छ । एक राज्यमन्त्री सहित ६ मन्त्रालय आफूहरुको भागमा आउने समाजवादीका नेताहरुले बताएका छन् ।
समाजवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम लगभग टुंगो लागिसकेको छ । यद्यपि आकांक्षीहरु बढेपछि अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको ती नेताले बताए ।
मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरुको नाम धेरै भए पनि वरिष्ठता, भूगोल, समावेशिता लगायतलाई आधार मानेर मापदण्ड बनाइएको ती नेताले बताए । सम्भावित मन्त्रीहरुको नामबारे अध्यक्ष माधव नेपाल सहित स्थायी समितिका नेताहरुले समेत निर्णायक छलफल गर्दैछन् ।
चौधरी दाङबाट निर्वाचित सांसद हुन् । नेकपा (एस) निर्माण प्रक्रियामा उनी सक्रिय थिए । यस्तै लामो समय विध्यार्थी राजनीतिबाट आएकी झाँक्री समानुपातिक तर्फको सांसद हुन् । प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ भने यसअघि एमालेमा छँदा केपी ओली निकट मानिन्थे ।
डोटीबाट निर्वाचित आले ओली नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री समेत थिए । तनहुँबाट निर्वाचित किसान लामो समय ओली निकट नेताको रुपमा चिनिन्थे ।